January 14, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Ethiopia threatens to disintegrate amid creeping Balkanisation – The Irish Times
Ethiopia News January 14, 2020
Ethiopia threatens to disintegrate amid creeping Balkanisation The Irish TimesSii akhriso
Muxuu ka yiri Vicente del Bosque go’aankii ay Barcelona shaqada kaga ceyrisay Ernesto Valverde?
Cayaaraha January 14, 2020
(Barcelona) 14 Jan 2020. Macalinkii hore xulka qaranka Spain ee Vicente del Bosque ayaa ka hadlay arrinta ku saabsan in Ernesto Valverde laga ceyriyay shaqada tababarka ee kooxda kubadda cagta Barcelona. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku dhawaaqday xalay inay shaqada ka cayrisay Tababare Ernesto Valverde, isla markaana waxa ay magacaabatay macallin cusub. Barcelona Sii akhriso
Waa Kee dhaawicii ugu halista badnaa uguna xumaa ee soo gaaray Messi xirfaddiisa ciyareed ee kubadda cagta?
(Barcelona) 14 Jan 2020. Leonel Messi ayaa kubadda Cagta ka sameeyay dhacdooyin badan oo cajiib ah waxaase mar walba la is weydiiyaa dhaawicii ugu xumaa ee abid soo gaaray Lionel Messi. Haddaba dhaawacaas waxa uu ku qasbay Lionel Messi in uu seego finalka koobka UEFA Champions League. Ka daawo muqaalka hoose xogta oo dhameystiran oo aad […]Sii akhriso
Somali security forces recaptures key town from al-Shabaab – The East African
Somali News January 14, 2020
Somali security forces recaptures key town from al-Shabaab The East AfricanSii akhriso
Akhriso: Shuruudaha Musharaxiinta Doorashada Guddoonka Baarlamaanka dowlad Goboleedka Galmudug
Soomaaliya January 14, 2020
Dhuusamareeb (SONNA) – Guddiga Doorashada Guddoonka Baarlamaanka 2aad ee dowlad Goboleedka Galmudug ayaa soo saaray shuruudaha laga doonayo Xildhibaanada u tartamaya kuraasta Guddoonka Baarlamaanka. Guddiga ayaa soo bandhigay illaa siddeed shuruud oo ay ka mid yihiin in musharaxa uu haysto shahaado Jaamacadeed ama wax u dhigma, isla markaana uu bixiyo musharaxa u tartamaya Sii akhriso
Baydhabo (SONNA) – Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad oo howlo shaqo u joogta Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa ku guuleysatay in dhamaan la qaado jid gooyooyin ay dhigan jireen maleeshiyaad hubeysan deegaanno ka tirsan gobolka. Xeer Ilaaliyaha Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida Qeybta 27aad Gaashaanle Maxamed Cabdiqaadir Maxamed oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa Sii akhriso
(Muqdisho) 14 Jan 2020. Kooxaha Mogadishu City Club iyo Elman ayaa galabta kulan xiiso badan kuwada ciyaaray garoonka Eng Yariisow ee Ex Koonis, ciyaar qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League. Qeybtii koowaad kulanka ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineyso kooxda Elman Sports Club waxaana u dhaliyay ciyaaryahankeeda lagu magacaabo Jaamal, sidaas ayaa […]Sii akhriso
(Barcelona) 14 Jan 2020. Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa wuxuu shaaca ka qaaday sababta shaqada looga ceyriyay macalinkoodii hore ee Ernesto Valverde. Kooxda reer Catalonia ayaa waxa ay bedelka Tababare Ernesto Valverde u magacaabatay macallinkii hore ee kooxda Real Betis ee Quique Setien. Barcelona ayaa maanta qabatay shir jaraa’id Sii akhriso
Madaxweynaha JFS oo dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu ku tagay Cummaan
Muqdisho(SONNA) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay,kadib safar uu ku tagay dalka cummaan,halkaasi oo uu kaga qeybgalay tacsida Suldaan Qaamuuska Binu Siciid ee dalkaasi. Madaxweynaha oo Suldaanka cusub ee Cummaan Haysam Bin Daariq kula kulmay Qasriga Saldanada dalkaas Sii akhriso
Baydhabo (SONNA) – Madaxweynaha Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo maanta shir uga furmay magaalada Baydhabo ayaa kaga wad hadlay arrimo badan oo ku saabsan iskaashi dhex mara labada dhinac. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Qorsheynta iyo maalgashiga ee dowlad Goboleedka Koofur Galbeed ayaa Sii akhriso